विवाह कि असमान कारोबार ? - विचार - कान्तिपुर समाचार
विवाह कि असमान कारोबार ?
मंसिर ६, २०७६ उमा भण्डारी
काठमाडौँ — विश्वका प्रायः समाजमा झैं नेपाली समाज पनि पितृवंशीय परम्परामा आधारित छ । यहांँ अंश र वंश छोरा–नाति हुँदै सन्तान–दर–सन्तानसम्म जान्छ । जतिसुकै आधुनिक कानुन बनेको भए पनि छोरीमार्फत अंश र वंश हस्तान्तरण हुने परिस्थिति अझै आइसकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा छोराविहीन परिवारहरू जति वटी छोरी जन्मिए पनि, जतिसुकै पढाइ–लेखाइ गराएर छोरीहरू हुर्काए पनि छोरीलाई विवाह गरेर अर्काको घर पठाएपछि वंशविहीन हुनुको अन्तहीन पीडाले छटपटाइरहेका पाइन्छन् । परम्परागत रूपले पितृप्रधान एवं पितृवंशीय समाजमा छोरी र छोरा जतिसुकै समान हुन् भने पनि त्यसलाई समाज र परिवारले आत्मसात् गर्न सकेको पाइन्न ।
छोरा नभएको परिवारलाई यथार्थमै अधुरो र अपूरो रूपमा लिने गरिएको छ । त्यो घरमा परम्परागत रूपले पुरुषद्वारा गरिँदै आएका संस्कार गर्ने मान्छे हुँदैन । विवाह गरेका छोरीहरू अर्को (गोत्र र थरधारीको) घरका सदस्य हुन्छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने तिनका लागि आमाबाको घरको दैलो लाग्छ । आमाबा कसले स्याहार्ने भन्ने समस्या अत्यन्त पेचिलो हुन्छ । पीएचडी अध्ययनका क्रममा मैले काठमाडौंको काँठक्षेत्रका बाहुन–क्षत्रीसँगको साक्षात्कारमा फरक सोचाइ पाउन सकिनँ ।
उदाहरण १ : छोराविहीन तर दुई वा तीनभन्दा बढी छोरी भएका आमाबाले छोरीहरूलाई अंशबन्डा गरिदिए । श्रीमान्को मृत्युपछि आमा एक्ली परिन् । कुनै पनि छोरी श्रीमान्को घर छोडेर आउन चाहेनन् वा सबै दिदीबहिनीले अंश लिएपछि मैले मात्रै किन हेर्नुपर्ने भन्ने कुरो आयो । पछि उनी एउटी छोरीको घर गएर लगभग शरणार्थीको हैसियतमा बसिन् ।
उदाहरण २ : तीनभन्दा बढी दिदीबहिनीमध्ये एक बहिनी पतिसहित माइतै बस्न आइन्, आमाबालाई स्याहार्न । आमाबाको देहान्तपछि दिदीबहिनीबीच सम्पत्तिलाई लिएर ठूलो झगडा पर्‍यो । अरू दिदीबहिनीले धेरथोर अंशमा चित्त बुझाए, तर जेठी चाहिँ बेखुसी भइरहिन् ।
उदाहरण ३ : एउटी आमाले आफ्नो भागको अंश सौतेनी छोराहरूलाई नदिई आफ्नै छोरी र नातिहरूलाई दिइन् । अहिले उनकी छोरीतिरका नाति र सौताका छोरातिरका नाति छिमेकी भएर बसेका छन् । अधिकारले केही नचले पनि सामाजिक मनोविज्ञानलाई समातेर छोरातिरका नातिले छोरीतिरका नातिलाई बेलाबेलै घोचपेच गरिरहन्छन् ।
उदाहरण ४ : एउटा परिवारमा तीन छोरा थिए । जेठा र कान्छा छोराका छोरी मात्र थिए भने माइलाका एक छोरा । जेठा र कान्छाले अलिअलि सम्पत्ति बेचेर छोरीहरूलाई पैसा दिए भने, बाँकी अंश माइलाका छोराका लागि छोडिदिए । यसबापत माइलाका छोराले पछि तिनको काजकिरिया, श्राद्ध आदि गर्नुपर्ने देखिन्छ । वरत्र र परत्र मिलाउने विस्मयकारी निर्णय आफैमा जटिल देखिन्छ ।
उदाहरण ५ : छ भाइ भएको एउटा परिवारमा एउटा भाइको एउटी छोरी मात्रै थिइन् भने, अरू भाइका छोराछोरी दुवै थिए । छोराविहीन दम्पतीको देहान्तपछित उनको भागको अंश अन्य भाइले दामासाही बाँडेर खाए । छोरीका सन्तानले केही पनि पाएनन् । अहिले दिवंगत दम्पतीको श्राद्ध गर्न अंश खाएका दाजुभाइबीच हानथाप देखिन्छ ।
उदाहरण ६ : एक नि :सन्तान दम्पतीले भाइको छोरालाई धर्मपुत्र बनाए, आफ्नो भागको सम्पूर्ण जग्गाजमिन उसकै नाममा गरिदिए । अहिले ती दम्पती करोडौंको सम्पत्ति लिएको धर्मपुत्रको परिवारसँंग कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
छोराविहीन वा सन्तानविहीन पितृवंशीय परिवारले आफ्नो अंशवंशका लागि अपनाएका विभिन्न उपायमध्ये केही उपर्युक्त नै हुन् । यी उपायमा नि :सन्तान वा छोरी मात्र भएका दम्पतीको सम्पत्ति खाने र जेनतेन काजकिरिया गर्ने मान्छेसम्म त जुटे, तर उनीहरूको थरगोत्र बोकिदिने चाहिँ कोही भएन । कतिपय अवस्थामा चाहिँ धर्मपुत्र (जो दाजुभाइका छोराहरू थिए) मार्फत अंशवंश कायम गरेको पाइन्छ ।
छोरी र छोरा समान हुन् भनेर जतिसुकै फलाके पनि माथिका उदाहरणले देखाउँछन्— हाम्रोजस्तो पितृवंशीय समाजमा छोरी र छोरा समान हैनन् । अंश हक ग्रहण गर्न त अहिलेको कानुनले छोरीलाई रोक लगाएको छैन, तर वंश हस्तान्तरण गर्ने तथा विवाहपछि छोरीको बासस्थान ज्वाइँको घरमा रहने भन्नेमा भने परम्परागत पितृवंशीय अभ्यास अद्यापि छ ।
छोरा र छोरी दुवै हुने आमाबालाई त केही फरक छैन छोराको विवाह गर्‍यो बुहारी आउँछिन् छोरी विवाह गरेर पठाइदियो, सकियो । तर छोरीछोरी हुने आमाबाका लागि तिनको विवाहपछि घर सुनसान हुन्छ । छोरीहरू अर्काका हुन्छन् कहिलेकाहीं आउँछन् दु :खपीर साटेर आआफ्ना घर लाग्छन् । अनि आमाबाबु नितान्त एक्लै, सन्तान भए पनि नि :सन्तानसरह ! छोरीमा जति माया खन्याए पनि, जति लगानी गरे पनि अन्ततोगत्वा त्यो अर्कैको हुन्छ । अरूको थरगोत्रमा गएर मिसिन्छ । अर्काको घर बन्छ । आफ्नो घर उजाड हुन्छ ।
विवाहपछिका सुरु–सुरुका वर्षमा छोरीहरूले आमाबाप्रति अधिक स्नेह र सहानुभूति देखाए पनि समयक्रमसँंगै उनीहरू आफ्नै घरव्यवहारमा व्यस्त हुन्छन् । अनि बुढेसकालमा आमाबाको हेरचाह छोराबुहारी भएको घरमा जस्तो हुन पाउँदैन । कम्तीमा पनि सामाजिक मर्यादा र बाध्यताले छोराबुहारीलाई जति अंश तथा वंशको उत्तराधिकारी बनाएको छ, त्यति नै कर्तव्यपालनको उत्तरदायित्व पनि थोपरिदिएको छ । मरेपछि यिनै छोराबुहारीले हेर्नुपर्छ भनेर पनि बूढाबूढी आफ्ना गुनासा एकातिर थुपारेर छोराबुहारीप्रति, देखावटी नै सही, सहिष्णु भएर बसेका हुन्छन् । छोरो विदेशमै भासिएको भए पनि साह्रोगाह्रो पर्दा घर आउँछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ ।
‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ नीतिले धेरै परिवारमा छोरीछोरी मात्रै छन् । छोरीछोरीमा चित्त बुझाउने परिवार गाउँ र सहर दुवैमा बढ्दै छन् । समाजको बदलिँदो पारिवारिक संरचनालाई सम्बोधन गर्न २०७६ को मुलुकी संहिताले अंश वितरणमा लचिलोपनासहित यो फरकपनालाई स्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । छोरी मात्रै हुँदाको मूल समस्या भनेको विवाहपछि छोरीको अंश (बासस्थान) र वंश (थरगोत्र) समूह फेरिनु हो ।
सांस्कृतिक एवं कानुनी रूपमै माइतीसँंगको सम्बन्धविच्छेद भएकी छोरीले आफ्ना आमाबाबुका लागि चाहेर पनि गरिपुर्‍याउन सक्ने बाटाहरू अत्यन्तै साँघुरा हुन्छन् । समाजले न त विवाहित छोरी माइती आएर बसेको राम्रो मान्छ, न बाबुआमा विवाहित छोरीको घर गएर बसेको । यी दुवै परिस्थितिलाई नपचाउने समाजकै कारण हरेक परिवारले एउटा मात्रै भए पनि छोरो जन्मोस् भन्ने चाहन्छ ।
मुखले ठिक्क पारे पनि मनमा छोरा नहुनुको पीडा छताछुल्ल भएको पाइन्छ । छोराछोरी दुवैको विदेश पलायनले गर्दा छोरो भए पनि के हुने हो र आमाबालाई छोडेरै जाने हो भन्ने जस्ता वैकल्पिक स्वर सुनिए पनि यथार्थमा ती भनाइ र सामाजिक धरातलमा धरती–आकाशको फरक छ ।
देशमा ठूलठूला क्रान्ति भए, नयाँ संविधान बने, समावेशिताका कुरा उठे, अंशाधिकारका कुरा पनि उठे, आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज उठे, मुलुकी संहितामार्फत सम्पत्तिको हस्तान्तरण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान अदलबदल गर्न पाउने नियम पनि आयो । तर पनि छोराविहीन परिवार केही अलमलमै रुमलिन परिरहेको कटु यथार्थ छर्लंगै छ । र, यो पीडा बोक्ने पुस्ता बढ्दै छ ।
यसमा गाँसिएका केही यक्षप्रश्न यथावत् छन् । जस्तै— छोरीछोरी मात्र हुने आमाबाबुले आफ्नो थरगोत्र आफ्ना छोरी र नातिनातिनीमा सार्न पाउने हक अधिकार छ कि छैन ? वा, हुनु पर्छ कि पर्दैन ? विवाह गरेकी छोरीले ‘म माइतै बसेर बाआमा स्याहार्छु’ भन्न पाउने कि नपाउने ? जसरी छोरासँंग बुहारी बस्छिन् र छोराको परिवार चल्छ, त्यसै गरी छोरीसँंग ज्वाइँ बसेर छोरीको परिवार सहज रूपले चलाउनु पर्ने कि नपर्ने ? छोरीका आमाबा लगानी गरिरहने, अनि ज्वाइँका आमाबाले त्यसमा तर काटिरहने ? यसलाई उल्ट्यायो भने के हुन्छ ?
एउटी छोरीलाई डाक्टरसम्म पढाउँदा अहिलेको महँगीमा लगभग दुई करोड लगानी गर्नुपर्छ । अनि अलि हेरिसक्नुको खर्चमा बिहेबारी गर्न पचास लाख लाग्छ । दुइटी छोरीलाई पढाउँदा चार–पाँच करोड झ्वाम ! यत्रो लगानी गरेका छोरीहरूबाट आमाबाले पाउने प्रतिफल चाहिँ के ? छोरीको तलबजति ज्वाइँको परिवारले कुम्ल्याउँछ । अझ ‘तेरा बाबुआमासँंग पैसा माग् न, दाजुभाइ छैनन् क्यारे, आज खाए पनि तिमीहरू, भोलि खाए पनि तिमीहरू’ भन्दै बीचबीचमा ज्वाइँको परिवारबाट आउने दबाब छुट्टै हुन्छ । अनि छोरीले जन्माइदिएका सन्तानलाई मेरा नातिनातिनी भनेर जुँगामा ताउ लाएर बस्छ, ज्वाइँको परिवार ।
बिचरा, छोरीका आमाबाले उही फोनमा कुरा गरेर चित्त बुझाउनुपर्छ । मर्दापर्दा काजकिरिया कसले गर्ने भन्ने तनावसंँगै जीवन अस्ताउँछ, छोरीका आमाबाको । हामी अरू विषयवस्तुलाई लिएर ठूलठूला कुरा गर्छौं, आमूल परिवर्तनका नारा लगाउँछौं, तर यस्ता कुरामा ध्यान दिँदैनौं ।
एउटा वा दुइटा सन्तान जन्माउने हरेक आमाबासँंग एउटा अंश र वंशको उत्तराधिकार चयन गर्ने अधिकार छ कि छैन ? ज्वाइँका आमाबाको घरबार चलाउनुपर्छ भने, छोरीका आमाबाको घरबारचाहिँ चलाउनुपर्दैन ? विवाहभित्रको यस्तो अराजक आर्थिक अवस्थाको सहज विकल्प त आमाबाको अधिकार उनका छोरीको कमाइ र उनले जन्माउने सन्तानमाथिको अधिकारभित्रै गाभिएको छ ।
यसको खोजी नगरी अहिलेकै विवाह सम्बन्धी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पद्धति कायम रहिरहने हो भने, छोरी र छोरा बराबर भन्नुको तुक छैन । यो पद्धतिले छोरीका आमाबालाई त्यस्तो लगानी गर्न बाध्य पारेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रतिफल ज्वाइँको परिवारले प्राप्त गर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०९:४०
बौद्धिक युवाको एक्लोपना
मंसिर ६, २०७६ उज्ज्वल प्रसाईं
काठमाडौँ — मानव समाजका जटिलता वृद्धि भएका छन् । पुराना संकटका नयाँ रूप सतहमा देखिएका छन्, कतिपय नौला संकट बोधगम्य छैनन् । मानव जीवन र दुनियाँको अस्तित्वसँग जोडिएका प्रश्नमा हिजो गरिएका कतिपय दार्शनिक चिन्तन विलुप्त हुने सम्भावना छ ।
बौद्धिक विलासका निम्ति ती मीमांसा कतै प्रयोग भएका हुन सक्छन्, तिनलाई अद्यावधिक गर्दै मान्छे र प्रकृतिको हित सोच्ने काम भने प्राथमिकतामा छैन । बजार आफैमा प्रभावशाली विचारधारा एवं समग्र राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासको केन्द्र भएकाले प्राथमिकतामा स्वयं बजार छ ।
उम्दा भनिएका कवितादेखि अति उपयोगी भनिएको प्रविधिसम्म, प्रभावशाली भनिएका आर्थिक सिद्धान्तदेखि नयाँ धर्मको प्रतिपादनसम्म सबैको केन्द्र बजार हो । नाओमी क्लिनले त्यसै भनेकी होइनन्, ‘हामीलाई कविता र अध्यात्मका पनि ब्रान्ड चाहिन थालेको छ ।’ वर्गीय आन्दोलनको उपादेयता सिद्ध गर्न खोज्नेदेखि सामुदायिक पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरूसम्म सबै बजारु ऊहापोहमा सीमित छन् । उनीहरूका संघर्ष, गतिविधि, संगठन, नेतृत्व सबै बजारमा प्रभाव जमाउन उद्यत रहन्छन् ।
अरू त अरू, बजारको आलोचना र विकल्प स्वयं बजारकै औजार बन्न पुग्छ । यस प्रवृत्तिको सबैभन्दा नजिकको दृष्टान्तबारे पढ्न मनलागे मेघनाद देसाईकृत ‘पोलिटिक्स : ट्रम्प, मोदी, ब्रेक्जिट एन्ड द प्रोस्पेक्ट फर लिबरल डेमोक्रेसी’ पढे पुग्छ ।
नेपालमा भइरहेका बौद्धिक चर्चाको मसिनो अवलोकन गर्दा पनि देखिन्छ, बजारवादको आलोचना गर्नेले विकल्पमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अघि सार्छन् । ‘एथ्नो–नेसनलिजम’ भन्न मिल्ने त्यो राष्ट्रवादले अन्ततः बजारकै सेवा गर्छ र बजारकै भरमा त्यो अडिन खोज्छ । बजारको जकडबन्दलाई चुनौती दिँदै मुक्त समाजको परिकल्पना गर्न सक्छु भनेर कार्ल पोल्यानीदेखि कार्ल पोपरसम्मको उद्धरण दिएर लेख्ने एक थरीले पञ्चायती राष्ट्रवादलाई अन्तिम सत्य ठान्छन् ।
पश्चिमा ज्ञानको दबदबालाई चिर्ने सपना देख्ने एवं पूर्वीय सभ्यताको पुनःस्थापना खोज्ने अर्का थरीले नागार्जुनदेखि आशिष नन्दीसम्म स्मरण गर्दागर्दै विनायक दामोदर सावरकरलाई आदर्श स्थापना गर्न पुग्छन् । प्रकारान्तरले मौलिकताका नाममा ज्ञानोद्यमको ब्राह्मणवादी वृत्तको परिकल्पना गर्छन् र समाजलाई त्यसैको कैदी बनाउने प्रयत्न गर्छन् । यो प्रवृत्तिको विकराल एवं विकृत रूप भारतमा देखिन्छ ।
राष्ट्रवादको भावुकता बेच्न नखोज्नेहरूले पनि चल्तीको उदारवादी रूपरेखाभन्दा भिन्न सोच्न सके जस्तो लाग्दैन । समाजवाद पनि कतै छलकपटका निम्ति प्रयोग हुन्छ, कतै विलासी गफका लागि । धेरैजसो समाजवादी उही राष्ट्रवादको बेकामे जामा पहिरिएर राजनीतिक सोकेसमा सजिन पुग्छन् । परिणाम, समाजवाद स्वयं बजारु हल्लाखल्लाको सानो चिच्याहटमा सीमित हुन्छ ।
पुँजीवाद गहिरो र विस्तारित हुँदै जाँदा देखा परेका संकटबारे बुझ्न र नयाँ विकल्पको खोजी गर्न कुनै तयारी सूत्रहरू उपयोगी होलान् भन्ने लाग्दैन । उदारवादी अर्थव्यवस्थाको उच्चतम अभ्यासपश्चात् फासीवादको उदय हुन थालेको देखेर आत्तिएकाहरूले नयाँ बाटो खोज्न सकिरहेका छैनन् । अघिल्लो शताब्दीमा प्रतिपादित कतिपय सिद्धान्त अहिले सहयोगी हुन सक्छन्, तर ती स्वयंले नयाँ बाटो तयार गरिदिँदैनन् ।
मानव समाजलाई बस्नलायक, सिर्जनात्मक एवं दिगो बनाउन नयाँ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जग निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । हिजो आफैले खनेको बाटो वा वरण गरेको सिद्धान्तको निर्मम समीक्षा गर्न सक्नेले मात्रै नयाँ गोरेटो कल्पिन सक्ला । नयाँ किसिमको मानवीय सम्बन्ध एवं मानव–प्रकृति सम्बन्धको परिकल्पना अघि सार्न सक्ला । न कथित गौरवशाली विगतको केही अर्थ छ, न तयारी सूत्रबद्ध स्वर्गको ।
यस्तो परिकल्पना गर्ने कसले ? परिकल्पनालाई अभ्यासमा परिणत गर्ने कसरी ? के विश्वविद्यालय वा अध्ययन प्रतिष्ठानहरू त्यस्ता ठाउँ हुन्, जहाँ यो स्तरको परिकल्पना सम्भव होओस् ? के सामाजिक आन्दोलनहरूमा यस्ता परिकल्पनाका लागि ठाउँ हुन्छ ? के राजनीतिक दलहरू नै त्यस्ता मञ्च हुन्, जहाँ नयाँ दुनियाँको परिकल्पना गर्दै त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने साहस गरिन्छ ? विवाह र परिवारजस्ता अत्यन्त लामो इतिहास भएका संस्थाले यस्ता नयाँ परिकल्पनालाई अभ्यासमा परिणत गर्न मद्दत गर्लान् ? स्वयं आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणा नै समस्याका रूपमा देखा पर्दैन ? अथवा, यस्तो परिकल्पना कुनै योजना वा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेपबिना कुनै एक सज्जनको दिमागमा एक बिहान आफै कोरलिन पुग्छ ?
समय आएपछि स्वतः यस्ता परिकल्पना कोरलिन थाल्छन् भन्ने नियतिवादमा विश्वास छैन । यसका लागि सुदीर्घ बौद्धिक श्रम आवश्यक हुन्छ, प्रचुर कल्पनाशक्तिको खाँचो पर्छ । यस्ता उद्यममा लागेका मान्छेहरूमा बौद्धिक इमानदारी उति नै जरुरी हुन्छ । त्यसैले सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो— के नयाँ पुस्ताको राजनीतिक एवं बौद्धिक नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र समूहले यस्ता अप्ठ्यारा कामको बोझ उठाउन सक्छन् ? अनेक खतरा मोलेर, बजारु मोहलाई गौण बनाएर हिजोका सारा स्थापत्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् ? के नेपालजस्ता देशबाटै त्यति आँट भएको नयाँ पुस्ता जन्मन सक्छ ?
राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ भनिने पुस्तालाई हेर्दा आँट गर्न सक्ने कोही देखिँदैन । विद्यार्थी राजनीतिमा भएका वा स्थानीय राजनीतिबाट उदाउन खोजेका युवामा ज्ञानोद्यमप्रति चरम उदासीनता छ । सस्तो पैसाको खोजी, शक्ति अभ्यास गर्ने अति हतारो, शक्तिशाली नेतृत्वको हरदम चाकडी र समाजमा उठेका अप्ठ्यारा प्रश्नबाट तर्किने सजिला बाटाको खोजीमा उनीहरूको दिनचर्या बित्छ ।
एकदमै आशालाग्दा भनिएका र तारतम्य मिले पार्टी सत्ताको लगाम पाउने सम्भावना भएका नयाँ नेतामा समेत कल्पनाशक्तिको अल्पता डरलाग्दो छ । चलेको रीतमा आफूलाई अलिकति फरक र लोकप्रिय देखाउने होडमा सीमित उनीहरूको कल्पना क्षमता वृद्धि हुने सम्भावना न्यून छ । युवावयमा हुँदा बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठहरूमा जति बौद्धिक आत्मविश्वास र कल्पनाशीलता थियो, त्यसको सानो अंश पनि अहिलेका युवा नेतामा नहुनु हाम्रो त्रासदी हो ।
विश्वविद्यालय, सञ्चार क्षेत्र र समग्र आमवृत्त एकातिर बजारको कब्जामा छ भने, अर्कातिर दक्षिणपन्थी उभारले अति प्रभावित छ । बजारले राजनीतिका जटिलतालाई अनदेखा गराउने अनवरत कोसिस गरिरहन्छ । दक्षिणपन्थले राजनीतिक समस्याको निदानका लागि एउटा तानाशाह मसिहाको परिकल्पनामा निमग्न तुल्याइदिन्छ । यी दुईको प्रभावबाट आफूलाई जोगाएर स्वतन्त्र चिन्तन गर्न खोज्नेलाई अदम्य साहस चाहिन्छ ।
बौद्धिक कर्ममा लागेका अध्येता, प्राध्यापक, लेखक, कवि र वैज्ञानिक युवाहरूको स–सानो जमात तयार भएको छ । तर उनीहरू थिति बदल्ने अभियानमा प्रत्यक्ष सामेल हुन सकिरहेका छैनन् । आफ्नै अग्रसरतामा अभियन्ता बन्न सकस मानिरहेका छन् । अघिल्तिर देखिएका कथित वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई विकल्प मान्न तयार छैनन् ।
लेखक आहुतिले भनेजस्तो, जीविका मात्रैलाई सर्वोपरि ठानेर बजार वा राजनीतिक सत्ताको सुमेरु घुमिरहने जीविकावादी मात्र पनि छैनन् सबै युवा । जीविकावादको प्रकोपबाट बच्ने उपायको खोजी आफैमा निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ । समस्याका बावजुद, विद्यमान समाजलाई बदल्न चाहिने दार्शनिक चिन्तन गर्ने कोसिस उनीहरू गरिरहेकै छन् ।
स्थापित बजार एवं सत्ताले ‘कोअप्ट’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत अन्दाज गरेर प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर न कुनै राजनीतिक मञ्चलाई आफ्नो मान्न सकेका छन्, न कुनै सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनमा उभार थप्न सकिरहेका छन् । उनीहरू एक्लाएक्लै आ–आफ्ना स–साना प्रयत्नमा सीमित छन् । सायद कुनै एउटा विन्दुसम्म उनीहरू एक्लै हिँडेको पनि मनासिब नै हुन्छ कि !
नोम चोम्स्की जस्ता अप्ठ्यारा सत्य नडराई बोल्न सक्ने र मान्छेको सोच्ने ढंग नै बदल्न सक्ने विद्वान्को कमीलाई इंगित गर्दै अरुन्धती रोयले ‘द लोन्लिनेस अफ नोम चोम्स्की’ लेखेकी थिइन् । विद्यमान व्यवस्थाले रोय र चोम्स्की दुवैलाई एक्लो र परित्यक्त बनाउन खोजिरहेको छ । जोखिम मोलेर उनीहरूले सीमान्तीकृत मान्छेका ठूला समूह र आन्दोलनहरूसँग जोडिने साहस देखाएका छन् । नेपाली बौद्धिक युवा परीक्षामा छन् ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०९:३६
महेन्द्र पी लामा